Myrto House (isidlo sakusasa sifakiwe)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSofronis
IMyrto House yindawo entle eyakhiwe ngamatye kwilali yaseTochni kunye nenxalenye yeCyprus Villages Ltd. Le ndlu iguqulelwa ekubeni yindlu enamagumbi okulala amane abuyiselwe ngobuchule kwaye anikwe intuthuzelo engqondweni. Iyunithi nganye ine-balcony yayo / indawo yepatio epheleleyo kunye nefenitshala yangaphandle. Uya kufumana igumbi ngalinye lihonjiswe ngokukodwa ngezinto zakudala zaseCypriot ezinomtsalane kunye nezinto zobugcisa. Nandipha ukufikelela kwindawo yedama ekwabelwana ngayo ngeebhedi zelanga apho unokuphumla emini.
Indlu yaseMyrto kwilali yaseTochni ibekwe embindini wesiqithi ivumela ukufikelela lula kwisiqithi sonke ngaphakathi kwemizuzu engama-30 yokuqhuba. Ulwandle olukufutshane lunemizuzu emi-5 kuphela, amatye amahle amhlophe e "Governors Beach" yimizuzu nje eli-10 kwaye idolophu yaseLemesos inokufikelelwa ngemizuzu eli-15. Inika isiseko esifanelekileyo sokuphumla kwaye sonwabele indawo enoxolo kwilali ngokudibanisa nohambo lwemini ukuya kwiidolophu ezikufutshane, iilwandle, iindawo zakudala, iimonasteries njl.njl. Ukongeza sinikezela ngesikhululo sethu sebhayisekile esingaphakathi kwendlu apho uya kuba nokufikelela entabeni, kwindlela kunye neendawo ezihlala kuyo. Iibhayisekile ze-E. Ukhenketho olukhokelwayo lukwakhona. Ibandakanyiwe kwixabiso lenkonzo yokucoca kabini ngeveki kunye ne-air conditioning. Isidlo sakusasa sikwafakiwe kwaye sihanjiswa rhoqo kusasa kwiTochni Tavern kwilali.
ETochni unethuba elikhethekileyo lokuhlala kwikhaya lelali elakhiwe ngamatye. Hamba kwiindledlana ezimxinwa eziya kwindawo yelali, yiba nekofu nabahlali kwaye uzinze kubomi obulula beMeditera obuhlonipha kwaye bukhulise izithethe ezingaphelelwa lixesha. Ngaphambi kokuba uyazi, uya kuziva uyinxalenye yoluntu lwendawo, ukonwabela ububele baseCypriot besisa obunokushwankathelwa ngegama elinye: "kopiaste" elithetha "yiza kwaye uhlanganyele nathi!"
Indawo yethu yokutyela "iTochni Tavern" ibonelela ngesidlo sakusasa esiBandakanywe nendawo yakho yokuhlala kwaye sivulelwe isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa yonke imihla. I-Tochni Tavern yimizuzu emi-2 yokuqhuba ukusuka kwindlu yaseMyrto okanye ukuhamba ngomzuzu we-10-15.
Umbuki zindwendwe ngu- Sofronis
Sifumaneka yonke imihla kwiofisi yethu yelali ngoko ungalibazisi ukufikelela kulo naluphi na uncedo.